Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay markii garax gaari uu ku qarxay banaanka xarunta booliiska Waaberi ee kutaala Muqdisho maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah.
In ka badan 10 kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay masuuliyada weerarka maanta oo Khamiis ah, balse ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa badanaa qaada weerarada argagixiso ee gudaha Muqdisho.
Ururka ayaa kordhiyay weeraradooda gudaha Muqdisho intii lagu guda jiray maalmihii u dambeeyay ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
Ceerigaabo-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii falaagada Somaliland Kornayl Cawil Siciid Caare ayaa heshiis la gaaray dowladda Somaliland, sida uu warbaahinta u sheegay maanta oo Khamiis ah, isaga oo ka hadlayay saldhigiisa oo kuyaala buuraleyda u dhow magaalada [...]